Uhlaziyo lweHtc Hero luyafumaneka | I-Androidsis
UHLAZIYO LWEQHAWE LEHTCO EFUMANAYO NGOKU
antocara | | nokuVavanyelwa, Izaziso, i-ROM
Ukusuka kwiphepha elisemthethweni le- IHtc eSpain uhlaziyo lweetheminali ngoku lunokukhutshelwa IHtc iqhawe ukusuka kumsebenzisi weOrange simahla. Ngale hlaziyo kwi-la rom 2.73.405.5 ujongano luyacwangciswa ngakumbi IHtc Sense kwaye ke ukuphucula amava omsebenzisi. Ukongeza, kunokwenzeka ukuphucula ukugxila kwekhamera efakwe kwifowuni.
Ukufakwa kuyacetyiswa ukuba ufunde ngokucophelela imiyalelo edwelisiweyo apha. Inokuhlaziywa kuphela kwikhompyuter ene-Windows XP Sp2 okanye iWindows Vista efakiweyo, kwaye kufuneka ufake Ukuvumelanisa i-HTC kwikhompyuter. Ngokuqhagamshela ifowuni kwikhompyuter kwaye yakuba iyamkele, siphumeza i-rom esele siyikhuphele ngaphambili kwaye kufuneka silinde ukufakwa kwayo ukugqiba kwaye kungabikho enye into. Thatha ulumkiso lokuba ibhetri ihlawuliswe kwaye nemowudi ye-PC yokufihlwa isebenze.
Kwividiyo sinokubona isiphelo sendalo seHtc kunye nohlaziyo esele lufakiwe.
UKUHLAZIYWA: I-rom ebonakala kwiphepha elisemthethweni le-Htc yeyetheminali yasimahla. Umsebenzi we-Orenji kuya kufuneka aqalise uhlaziyo ngokwakhe
QAPHELA 20/09/09: Ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa kwiwebhusayithi ye IHtc yase-UK khuphela i IHtc uTshawe ngu orenji Ukusuka kwelo lizwe. IHtc Hero Orange eSpain Iyawa.
QAPHELA 01/10/09: Ngoku iyafumaneka kwiHtc Hero Orange yaseSpain, jonga apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » UHLAZIYO LWEQHAWE LEHTCO EFUMANAYO NGOKU
Izimvo ezi-19, shiya ezakho
Ewe, ayizukundivumela ndikhuphele i-rom .. xa ndibeka inombolo ye-serial indixelela:
Siyaxolisa, kodwa isoftware ofuna ukuyikhuphela ayifumaneki kwimodeli yesixhobo sakho.
ewe, ndineHTC Hero xD
ULuis Gil sitsho
Nam andinayo, kwaye ndineliQhawe le-Orenji. : PP
Phendula uLuis Gil
Enye enye iyafana, jonga ukuba makhe ndibhalise iwebhusayithi yeHTC yeHero yam nenamba yakhe, kodwa ngoku akandivumeli ndiyikhuphele.
Masibone ukuba umntu unobubele ngokwaneleyo ukuxhoma iROM kwenye indawo ukuze siyikhuphele kwaye siyihlaziye.
Ngaba uyazi ukuba ususa iifoto zakho, abafowunelwa kunye / okanye umculo?
Impendulo emfutshane: EWE
Impendulo ende: okwenziwa luhlaziyo kukufomatha iHero yakho emva koko ufake i-Android entsha. Masihambe njengaxa ufomatha iPC ukufaka iWindows / Linux entsha
Ke umntu uye wakwazi ukuyikhuphela? Oo
Apho ithi zonke iinketho zomsebenzisi wethu ziya kucinywa phakathi kwezinye izinto. Ngaba olu hlaziyo lukhuselekile kunye neorenji? Ngaba iyibeka kwindawo ethile kwiwebhusayithi esemthethweni?
Ngaba kukho umntu owenzile kwaye banokunika ubungqina babo? Ndingabagcina njani bonke abafowunelwa bam kunye nenye idatha eya kucinywa.
I-ROM yephepha elisemthethweni lelamaGorha asimahla.
Andibekwanga kwisifundo kodwa ndifumene isicelo kwintengiso ukukopa abafowunelwa ngaphandle. Khangela i-contact2sim yasimahla kwaye isebenza.
Bendisithi "khuphela oonxibelelwano kwisim", uHero wam ebengalazi igama lekhadi.
Ndijongile, ndiyikhuphile i-rom nenombolo yesiriyali evela kwisiphelo sendlela kwaye ndayifaka kwiOrange Hero, kodwa kungekudala emva kokuqala kofakelo lwarhoxiswa kwaye lakuxelela ukuba ayinakwenziwa.
Ke kuyakufuneka silinde ingxelo yeorenji: S
Uhlaziyo lwe-Oange yase-UK ngoku luyafumaneka kwiphepha le-Htc UK. KwiSpain iyawa
Ewe, bathatha ithutyana hayi ... la malaphu eorenji ayahamba! eSpain soloko ezokugqibela .. ukuba asko
kodwa ezo zeorenji zithetha into ngazo? ithi izophuma nini? Ndichithe isiqingatha semva kwemini ndisilwa nenkonzo yabathengi kwaye notshintsho akukho mntu wayenombono ombi, abazi nokuba yi-Android, kungasathethwa ke ngohlaziyo! Kuyaphambana!
Yile nto zinayo ezi nkampani. UMovistar uhlaziye eli phupha ikhekhe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye nokuba ubuze kangakanani, abakuxelelanga nto. Ukuba bendikwi-CMT bebeya kufumanisa bonke.
Ndine-ORANGE HTC HERO entsha kwaye isebenze ngokugqibeleleyo. Ndifakele i-firmware entsha:
Ukuphuculwa kweROM yeHTC Hero (iorenji) _2.73.61.5
yintoni kwiwebhusayithi ye-htc kwaye yonke into ihambe ngokugqibeleleyo.
INGXAKI kukuba ngoku andinakukhuphela iinkqubo ngeNtengiso ye-Android.
Xa ndingena kwiNtengiso ye-Android, ilinda «Imigaqo yeNkonzo yeNtengiso ye-Android. Ilayisha ... »kwaye ungaze uhambe apho.
Ngaba uyayazi indlela yokusombulula? Ngaba ikhona indlela yokubuyela kwi-ROM yoqobo okanye entsha elungisa oku?
Irwyn, kwenzeka into efanayo kum. sowuyisombulule?
Molweni nonke, ndinegorha le-htc leorenji ekhutshwe kwi-imei, ndikhuphela uhlaziyo kwaye yonke into ilungile kodwa xa ndizama ukuvula ifayile ngeefowuni ifowuni iyandiqhawula. enkosi imibuliso
Molweni nonke, ndinegorha le-htc leorenji ekhutshwe kwi-imei, ndikhuphela uhlaziyo kwaye yonke into ilungile kodwa xa ndizama ukuvula ifayile ngeefowuni ifowuni iyandiqhawula. enkosi imibuliso. Masibone ukuba ukhona umntu onokundinceda
I-FACEBOOK YE-ANDROID KWIMvelaphi